Wasiir Cismaan Dubbe oo beeniyay Ka-noqoshada Dacwadda Badda ee qabsaday Baraha bulshada - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiir Cismaan Dubbe oo beeniyay Ka-noqoshada Dacwadda Badda ee qabsaday Baraha bulshada
Wasiirka Warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa beeniyay warar si weyn loogu baahiyey Baraha bulshada oo ku saabsan in dacwadda Kiiska Badda laga soo celinayo Maxkamadda ICJ.
Wasiir Dubbe oo dalka ka maqan ayaa qoraalkiisa ku yiri: “Cilaaqaadka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya oo hore u xumaaday waxa hadda laga shaqaynayaa sidii loo wanaajin lahaa, waan u mahad-celinaynaa wadamada ka shaqeeyey isu soo dhowaan tan..”
Wuxuu beeniyey jiritaanka wararka sheegaya in ay dalka Qatar ku kulmayaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. “Xilligan waxba kama jiraan wararka la faafinayo ee sheegaya in labada Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ay hadda kulmayaan kuna kulmayaan Doha/Qatar.”
Wuxuu kaloo ka hadalay arrinta Kiiska Badda, isagoo sheegay in la sugayo go’aanka Maxkamadda. “Arrinka Badda Soomaaliyana wuxu ku jiraa gacanta Maxkamadda Caddaalada Adduunka ee ICJ, waxaana la wada sugayaa go’aanka Maxkamadda”.
Waxaa Baraha bulshada si weyn ugu faafay War uu qoray Nin reer Qatar ah oo ku saabsan suuragalnimada in Soomaaliya dacwadda kasoo celiso Maxkamadda ICJ, marka ay magaalada Doha ku kulmaan Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta.
Previous articleMusharixiinta oo ka hor yimid Xil uu Midowga Afrika u magacaabay Sarkaal Sare oo ka tirsanaa AMISOM
Next articleJen. Indha-cadde: “Markii aan 300 Mitir u tagnay Gurigii uu Farmaajo ku noolaa ayuu ka noqday Afgembigii..”